I-Silken Hotels, i-luxury kunye nobuntu-ii-Geofumadas
NgoJulayi, 2009 Uhambo
Ihotele isoloko ifuna ukwanelisa kwaye inike inkonzo engcono; kodwa kuphela okunye okulawulwa ukuba kuhlonzwe njengeyona nto ibhetele, kwaye le yimeko yesikhenketho se-Hoteles Silken, esinikezelwa ngokupheleleyo ekunikezeni inkonzo enhle kunye nemigangatho ukuze kufikelele ukuhlala okuhle.
Ixesha liye lakwazi ukwenza ikhenketho yehotela iSilken, enye yezona zikhulu kunye nezona ziqaphele eSpeyin, ngoku zibala ngeehotele ze-34. Silken ikhona kwizixeko eziphambili, kunye Hotele zaseMadrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca, phakathi kwabanye.
Zonke iinkcukacha kunye nezihlandlo zibalulekile kuSilken, ukususela ekufikeni kwihotele unokuziva uwamkelekile kwaye uyayiqonda into ekhethekileyo, kunye neyokuqala kwiklasi; Ngoko iihotele ze-20 zekhenkethi sele sele ziqinisekisiwe kwi-Quality Iso kunye neQ-Quality Quality.
Ngamanye amahotele anobuntu bawo, ukuhlala kuwo kuya kuba ngamava kwaye kuya kuzisa iintlawulo, njengokuba yingxenye yeSikhumbiso seCalken, apho ukuvakatyelelwa kwamanqaku athatywayo ukufumana ukuhlala kwamahhala kwiihotele zechungechunge.
Njengengxenye yokukhula koluhlu, kulo nyaka i-3 iya kwenza izivulo ezintsha, kunye hotele e Madrid, ELondon naseBerlin; kwaye i-2010 Silken iya kuba seLa Coruña, Alicante naseLas Palmas.
Ngewebhusayithi eyiSilken ungabhekisisa ukufumaneka kwamagumbi kwihotele nganye kwinqanawa, fumana amanani alungileyo kwaye ukuba kuthengiswa, xa ufika ehotele ibhotile yewayini iya kunikwa kwaye unako ukuthatha inxaxheba i-raffle yamahhala evelele kwihotele e-Puerta América Madrid.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Seminar kwi-PowerCivil yaseLatin America
Post Next Indlela yokwazi iphasiwedi yefayiliOkulandelayo "